Madaxweyne Farmaajo oo shir guddoominaya shir looga hadlayo gurmadka abaaraha (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo shir guddoominaya shir looga hadlayo gurmadka abaaraha (SAWIRO)
Waxaa goordhaw xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho ka furmay shir looga hadlaayo sidii wax looga qaban lahaa abaaraha ka jira dalka Soomaaliya, waxaana shirkaasi shir guddoominaya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo.
Shirkaan oo haatan socda ayaa la sheegayaa inay ka qeyb-galayaan madax ka socota deeq-bixiyaasha caalamka, madaxda maamul goboleedyadda dalka, madaxda maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale madax ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Waxyaabaha ugu waaweyn ee shirka looga hadlaayo ayaa ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa xaaladda abaareed ee ka jirta gobolada dalka Soomaaliya, waxaana haatan shirka la isku dhaafsanayaa qaabka wax ka qabashada abaarahaas.
Shirkaan ayaa lasoo gaba-gabeyn doonnaa xilliga dambe ee maanta, waxaana markii uu soo gaba-gaboobo la filayaa in laga soo saaro qodobo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa abaaraha halakeeyay dalka Soomaaliya.
Xubnaha deeq bixiyaasha ee shirka ka qeyb-galaya ayaa laga filayaa inay shirkaasi ka sheegaan doorka ay ka qaadan doonaan abaaraha ka jira gobolada dalka Soomaaliya, oo ay dad iyo xoolo badan u dhinteen.